Nagarik Shukrabar - बजारमा बिक्नुभन्दा टिक्नु ठूलो
बजारमा बिक्नुभन्दा टिक्नु ठूलो
मङ्गलबार, २४ साउन २०७४, १२ : ५४ | शुक्रवार , Kathmandu
खोटाङमा जन्मिएका अलाइभ ग्लाइडर (किसन राई) व्यावसायिक सफलताको सिँढी चढ्दैछन् । लाखौँको लगानीबाट व्यवसाय सुरु गरेका उनले अहिले करोडौँको लगानीमा विश्व बजारमा उत्पादन भएका सबै ब्रान्डका मोबाइल एकै ठाउँमा पाइने, विभिन्न ठाउँमा सिटिभी मोबाइलका चेन आउलेट सञ्चालन गरिरेहका छन् । ग्लाइडर सहकारी, होटल, रेस्टुरेन्ट, क्लब, मोबाइल एप्स, रिचार्जर लगायतका व्यवसायमा संलग्न छन् । सफल युवा उद्यमीको परिचय बनाएका सिटिभी मोबाइलका सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ग्लाइडरसँग शुक्रबारको लागि दिलीप पौडेलले गरेको कुराकानी :
व्यावसायिक क्षेत्रमा कसरी आउनु भयो ?
व्यवसाय गर्नुपर्छ भन्ने सोच थियो । समयको मागलाई हेरेर यस क्षेत्रमा आएको हुँ । नयाँ काम गर्ने सोचले व्यवसायलाई रोजेको हुँ ।
यहाँको पहिलो व्यवसाय के थियो ?
लाख रुपैयाँको लगानीबाट रेडियो, घडी, इलेक्ट्रोनिक्स पसल सुरु गरेको हुँ । त्यसपछि सोलार सिस्टम, घामबाट बिजुली बत्ती हुँदै हाइभिजन हल हुँदै मोबाइल कम्पनी, घरजग्गा, रेस्टुरेन्ट व्यवसाय क्लब पनि सञ्चालनमा ल्याएको छु । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको अनुदानमा सोलार व्यापार पनि गरेँ । बजारको मागअनुसार व्यवसाय गर्नुपर्छ भन्ने सोच छ । अहिले सिटिभी मोबाइलका आउटलेट सञ्चालन गरेको छु ।
सिटिभी मोबाइल आउटलेटबाट के सेवा दिनुहुन्छ ?
विभिन्न ब्रान्डका मोबाइल एउटै आउटलेटमा उपलब्ध हुन्छ । यो एउटा मोबाइल नभई सबै मोबाइलको हब हो । सिटिभीमा मोबाइलको कम्लिट सोलुसन हुन्छ । हामीले विश्व बजारमा उत्पादन भएका चल्तीका ब्रान्डका मोबाइल किन्न सक्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ । चल्तीमा रहेका ओप्पो, सामसुङ, आइफोन, हुवावे, जेडटिई, जियोनी, सोनी, मोटोरोला, कुलप्याड, लेनोभो, एचटीसी, नोकियालगायत बजारमा रहेका सबै प्रकारका मोबाइल एकै ठाउँमा पाइने सिटिभीमा व्यवस्था छ । यो मोबाइलको चेन सोरुम भएकाले एउटै स्टोर्समा सबै मोडलका मोबाइल बिक्री हुन्छ ।
कति आउलेट छन् ?
सुन्धारा, चाबहिलको केएल टावर, दरबारमार्ग, न्युरोडको ताम्राकार हाउसमा सिटिभी मोबाइलले सेवा दिइरहेका छन् ।
मैले मोबाइल व्यवसायमा करिब एक दसकदेखि काम गरिरहेको छु । उपभोक्ता मोबाइल किन्न पसल–पसल भौंतारिनु पर्ने बाध्यता थियो । कस्टमरको माग र भावना बुझेर कम्प्लिट प्याकेज एकै ठाउँमा हुनुपर्छ भनेर यो काम सुरु गरेको हुँ । एकै ठाउँमा सबै ब्रान्डका मोबाइल दिन सके राम्रो हुन्छ भनेर नयाँ अवधारणा लिएर आएका हौँ ।
अरु के सेवा दिनुहुन्छ ?
सर्भिसिङ सेवा पनि उपलब्ध गराउँछौँ । ६० मिनेटमै मोबाइलको सबै सर्भिस हुन्छ । एक्चेन्ज अफर पनि दिएका छौँ । हाई रेन्जका नयाँ मोबाइल उपलब्ध गराएका छौँ । किन्दा सबै भेराइटीका मोबाइल हेरेर किन्न सकिन्छ । हामीबाट लिएको सेवाग्राहीले एक्चेन्ज गर्न सक्छन् ।
कति पुँजीबाट व्यवसाय सुरु गर्नु भयो ?
१५ वर्षअगाडि एक लाख रुपैयाँबाट ।
अहिले लगानी कति पुग्यो ?
करोडमाथि अर्बमुनि ।
स्कुले जीवनमा के बन्छु भन्ने लाग्थ्यो ?
साहित्यकार बन्छु भन्ने थियो । थुप्रै कविताहरु पुस्तक, पत्रिकामा प्रकाशन गरेँ । परिस्थितिले व्यवसायमा आएँ ।
कतिलाई रोजगारी दिनु भएको छ ?
प्रत्यक्ष रुपमा दुई सय जना बढी ।
अन्य व्यवसायमा यहाँको संलग्नता ?
मेरै नेतृत्वमा युवा विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, रेस्टुरेन्ट, क्लब, रिचार्जर एम्प्स सञ्चालन गरिरहेको छु ।
सहकारीबाट के सेवा दिनुहुन्छ ?
नेपालमा सीप र शिक्षा भएका युवाहरु धेरै छन् तर तिनीहरु बेरोजगार छन् । पूँजी अभावमा उद्यम चलाउन नसकेकालाई लगानी गर्न सहकारी सुरु गरेको हो । बेरोजगारले योजना लिएर आए हामीले लगानी गर्छौं । सुरक्षित वचत, सुरक्षित लगानी, उज्ज्वल भविष्य भन्ने नारालाई आधार बनाएर काम गरिरहेका छौँ ।
म सफलभन्दा पनि प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे भएकाले प्रयास निरन्तर जारी राख्नुपर्छ । धैर्यका साथ समस्यालाई सामना गरेर अघि बढ्न सक्यो भने सफलता मिल्छ जस्तो लाग्छ । बजारमा बिक्नु ठूलो कुरा होइन, बजारमा टिक्नु ठूलो कुरा हो । सफलताका लागि जिउँदो मान्छेले सपना देख्छ । त्यस्तै मान्छेले काम गर्न नपाई छटपटी र तड्पाई पनि भोग्नुपर्ने हुन्छ । मान्छेको मृत्यु एक पटक हुन्छ तर सफल हुने मान्छे धेरै पटक मरेर बाँचेको अनुभूति गर्छ । यिनै कुराहरूको संगालो नै सफलताको मूल मन्त्र हुन सक्छ ।
अन्य क्षेत्रमा यहाँको संलग्नता ?
व्यवसायका अतिरिक्त समाज सेवा गर्छु । नाफाको १० देखि १५ प्रतिशतसम्म सामाजिक काममा खर्च गर्छु । वृद्धवृद्धाको आश्रम, बालकालिकालाई छात्रवृत्तिमा सहयोग गर्ने गरेको छु ।
यहाँको अन्य रुचि ?
प्रयास गरे कुनै कुरा असम्भव छैन भन्ने उदाहरणीय व्यक्तिको रुपमा स्थापित हुने मेरो सपना हो । साथै उत्पादनमा आधारित उधोगधन्दा गरी लाखौं बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिई देश विकास र समाज सेवामा गर्ने ।
साटोको इन्डस्ट्रियल थर्मल प्रिन्टर बजारमा
बार कोड नेपालले साटो कम्पनीको सिएलफोरएनएक्स सिरिजको इन्डस्ट्रियल थर्मल प्रिन्टर नेपाली बजारमा ल्याएको छ । उसले स्टिल उद्ध्योग, हस्पिटल, प्याथ ल्याब तथा अन्य प्रतिष्ठानलाई लक्षित गरेर प्रिन्टर नेपाल भित्र्याएको हो ।
‘प्राविधिक विषय पढे बेरोजगार हुनुपर्दैन’
अरु विषयभन्दा प्राविधिक विषय तुलनात्मक रुपमा रोजगारीको सम्भावना भएको क्षेत्र हो। पहिला जस्तो जताजतै अवसर नभए पनि प्राविधिक क्षेत्रमा रोजगारीको ग्यारेन्टी हुने भएकाले अभिभावक र विद्यार्थी आकर्षित छन्।
भारतीय प्राइभेट कम्पनिलाई ६५ करोड
करिब तीन अर्ब लागत खर्च आवश्यक पर्ने दोलखा जिल्लास्थित फिल्मसिटीको जग्गा घाँसले भरिएको छ। हरेक वर्ष सरकार एक डेढ करोड छुट्याएर झारा टारिरहेको छ।